क्योतोको तीन अथेण्टिक परिकार | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > FOOD > क्योतोको तीन अथेण्टिक परिकार
क्योतो एउटा ऐतिहासक सहर हो। यो सहर आफ्नो इतिहासमा निकै धनि छ। यो सहर प्रकृति र मोह लाग्दो फुलबारीले सजिएको छ। क्योतो को लामो इतिहासको झझल्को अहिले पनि क्योतोमा पूर्णरुपमा लतपतिएको छ। त्यसैले क्योतोलाई जापानकै सबै भन्दा संरक्षित सहर भनिन्छ। त्यसैगरी क्योतो आफ्नो थुप्रै ओरिजिनल परिकारको लागि पनि प्रशिद्ध छ। समुद्रबाट अलि टाढा रहेको क्योतो आफ्नो कलरिनरी विविधताको लागि चिनिन्छ। आज हामी हजुरहरुलाई क्योतोको तीन परिकारको ’bout बताउछौ।
१. कामोनासु देनगाकु
कामोनासु देनगाकु भनेको मिसो संग बेक गरिएको भान्टा हो। मिसो सोयाबिनको पेस्टलाई फरमेन्ट गरेर बनाइन्छ। यसलाई क्योतोको स्पेसल परिकार मानिन्छ। जापानीहरु यो परिकार निकै मनपराउछन। यो खान धेरै जसो गर्मि मौसममा खाने गरिन्छ। प्रयोग गरिने भान्टा जापानको कमिगमो र निशिगामा क्षेत्रमा फलाइन्छ। सुरुमा भान्टालाई बीच बाट दुई टुक्रा परिन्छ। गुदी जति खुर्केर कचौरा जस्तो आकार दिईन्छ। त्यसमा अन्य खानेकुरा भरिन्छ। प्रयोग गरिने मिसो दुई थरिको हुन्छ। सेतो मिसो अलि गुलियो हुन्छ अनि गाडा मिसो चाहि नुनिलो हुन्छ। सेतो मिसोमा तिल हालेको हुन्छ भने रातो गाडा मिसोमा तोरीको पेस्ट हालिएको हुन्छ। यो परिकारमा सब्जी र सृम्प पनि हाल्न सकिन्छ। सब्जीमा गाजर, फर्सी, पिडालु, भिंडी, सखरखण्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ।
चुकेमोनो(पिकल्स) जापानको परिकारमा नछुट्ने साइड डिस हो। अझ क्योतोको चुकेमोनो त जापान भरिनै लोकप्रिय छ। चुकेमोनो बनाउने चलन सन् ७२९ तिरबाट सुरु भएको बताईन्छ। जापानको चुकेमोनो तेती गाडा टेस्टको भने हुन्न। पिरो हुदै नहुने यी चुकेमोनो खादा निकै स्वादिष्ट हुन्छन। अमिलो हुने भएकोले जापानी तेइशोकुमा चुकेमोनोले त्यो खानाको स्वादनै बढाउछ। चुकेमोनो धेरै जसो सब्जी, फलफुल, मसरुम र सिविडबाट बनाइन्छ। छोटो अबधिमै खाई सक्नु पर्ने र लामो अबधि सम्म बस्ने दुई प्रकारको चुकेमोनो हुन्छ। चुकेमोनोको प्रमुख मसला भनेको नुन हो। यहि नुनले सब्जीलाई नरम बनाउछ। ल्याकटिक एसिड ब्याक्टेरियाले यसलाई त्यो टिपिकल स्वाद दिन्छ भने ओस्मोटिक चापले यसलाई कुहिनबाट बचाउछ
३. चिरिमेन सांशो
चिरिमेन सांशो जापानमा कनडिमेण्टको रुपमा प्रयोग गरिन्छ। यो सार्डिन माछाका भुराहरुलाई सुकाएर पछि जापानी टिमुर संग सोया ससमा पकाएर बनाइन्छ। यो धेरै जसो भात संग खाइन्छ। क्योतोको चिरिमेन सांशो निकै प्रसिद्ध छ। यो परिकार जापानीहरु आफ्नो घरमा पनि आफ्नै तरिकाले बनाउछन। सुपरमार्केट र स्टोरमा पनि यो प्याकेटमा सजिलै पाइन्छ। कतै कतै रेस्टुराण्टमा खाना खादा यो कस्टुमरलाई उपहारको स्वरुप पनि दिने गरिन्छ। चिरिमेन सांशो निकै पौष्टिक खाना हो। १०० ग्राम चिरिमेन सांशोमा ५०० मिलि ग्राम क्याल्सियम हुने गर्छ। मानिसलाई एक दिनलाई चाहिने क्याल्सियम यो परिकारको १०० ग्राम बाटनै प्राप्त हुन्छ।
क्योतोका अरु थुप्रै ओरिजिनल परिकारहरु छन्। यी तीन त्यस मध्यका विशेष हुन्। के हजुरहरुले यी परिकार खानु भएको छ ?